Dhacdada Apple ee Abriil 20 ayaa hadda rasmi ah | Waxaan ka socdaa mac
Subaxaan waxaa soo baxay war xan ah oo laga yaabo inay dhacdo dhacdo Apple ah Abriil 20. Waxay umuuqataa hadaad waydiiso Siri munaasabadda soo socota ee shirkadda, waxaan ku siin lahaa taariikhdaas. Markii aan ogaaday, waan isku dayay mana sii shaqeyn.
Markaa si aad ah umay caddayn inay ahayd "been abuur", ama cillad ku jirta nidaamka Apple. Waqtigan xaadirka ah, waxaan xaqiijin karnaa in shirkaddu ay si rasmi ah u shaacisay inay qaban doonto munaasabaddeeda soo socota 20 bishaan.
Waa rasmi hadda. Apple kaliya waxay xaqiijisay daqiiqado ka hor in tan xigta Talaado, Abriil 20 19da fiidnimo waqtiga Isbaanishka, waxaan la yeelan doonnaa ballan cusub oo dalwad ah oo lala yeelanayo dadka caadiga ah ee shirkadda si aan u soo bandhigno sii deynta xigta.
Xanta ayaa faafisay saacado yar ka hor markii dhowr isticmaale ay ogaadeen in markii la weydiinayo Siri dhacdada xigta ee Apple, uu ku jawaabay taariikhda Abriil 20. Si dhakhso leh khaladka waxaa u saxay Apple, laakiin bakaylaha mar hore ayaa la soo saaray.
Maaha markii ugu horeysay ee Siri uu nooga sheekeeyo dhacdo shirkada ka hor inta aysan rasmi noqon. Sannadkii 2016 Siri waxay filaysay taariikhda WWDC sanadkaas, haddana markale ayey dhacday.
Hada waa la arki doonaa waxa ay noo soo bandhigaan. Waxaan u qaadaneynaa mid cusub iPad Pro, iyo malaha nooc kale oo Apple Silicon ah. Haddii aan horey u haysanno mini Mac iyo MacBooks, waxa macquul ah ayaa wax uun noqon lahaa iMac oo leh processor M1. Way fiicnaan laheyd.
Jon Prosser wuxuu hubaa inuu boodayo waxyar isagoo tilmaamaya inay iyaguna soo bandhigi doonaan riyadooda AirTags. Laakiin waxay ku dhici doontaa isaga sida sheekada yeyda. Qofna ma rumaysan doono, oo weliba, Tim Cook ayaa jeebkiisa kala soo bixi doona. Ama maya…
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Dhacdada Apple ee Abriil 20 ayaa hadda rasmi ah
Will Smith Apple TV + Filimka "Xoriyada" Wuxuu Raadinayaa Muuqaallo Cusub